TrueReview: Angony mora ny famerenana ary ampivoaro ny laza sy ny fahitana ny orinasanao | Martech Zone
Androany maraina aho dia nihaona tamin'ny mpanjifa iray izay misy toerana marobe amin'ny orinasany. Na dia mahatsiravina ho an'ny tranonkalany aza ny fahitana ara-organika azy ireo, ny fametrahana azy ao amin'ny Google Kitapo fonosana fizarana nahafinaritra.
Nuansa izay tsy takatry ny orinasa maro. Ny pejy valin'ny motera isam-paritra dia misy fizarana telo lehibe:
Fikarohana karama - fehezin'ny soratra kely milaza hoe Ad, ny doka dia mazàna no misongadina eo an-tampon'ny pejy. Ireto toerana ireto dia atolotra amin'ny fotoana tena izy ary mandoa isaky ny tsindry na antso an-tariby ilay mpanao dokambarotra.
Kitapo fonosana - ny sarintany iray manan-danja dia ny ampahany manakiana ny pejy ary asehon'izy ireo ny orinasa, ny naotiny ary ny fampahalalana fanampiny. Ny laharana amin'ity fizarana ity dia faritan'ny naoty, tsikera ary hetsika ataon'ny orinasa amin'ny famoahana ny pejy Google Business.
Organic Search - eo am-pototry ny pejy dia misy valiny biolojika, rohy mankamin'ny tranokalan'ny orinasa voatanisa, ary milahatra tsara ho an'ireo teny nampiasain'ny mpampiasa motera fikarohana.
Manjaka ny fonosana map SERP
Araka ny hitanao fa hazavaina etsy ambony… ny lazan'ny fonenanao sy ny laza miorina amin'ny hevitra sy ny hetsika ao amin'ny pejin'ny orinasanao Google dia samy hafa tanteraka. Raha ny marina dia afaka manana iray tanteraka ianao raha tsy misy ny iray hafa (na dia tsy atoro anao aza).
Ny antony nahatonga an'ity mpanjifa ity nahavita tsara dia satria taona vitsivitsy lasa izay dia nametraka ny fizotrany mba hitadiavana hevitra momba ny Internet amin'ny mpanjifa rehetra notompoin'izy ireo. Rehefa nanomboka nanangona tsikera izy ireo… nanomboka nahita ny isan'ny referrals miakatra avy amin'ny motera fikarohana.
Raha mpamatsy tolotra eo an-toerana ianao na fivarotana antsinjarany, ny fitsikerana dia manakiana ny ezaky ny varotra nomerika anao. Tsy ny tamberim-bidy ihany no tsara hanatsarana ny orinasanao, ny fanamafisana ny fijerena miavaka dia hisarika mpanjifa bebe kokoa. Raha tsy manana fomba fanangonana tsikera mora foana ianao dia tokony hisoratra anarana amin'ny serivisy toy izany TrueReview.
Fomba fanangonana TrueReview Review Collection
TrueReview manamora ny raharaham-barotra ny mangataka tsikera isaky ny tranonkala, mahazo valiny mivantana avy amin'ny mpanjifa ary manatsara ny tsikera an-tserasera. Ny TrueReview dia ahafahan'ny orinasa mandefa SMS sy mailaka fandinihana na fangatahana fanadihadiana, izay manamora ny fahafahan'ny mpanjifa manome valiny. Ny tsara indrindra dia azonao atao ny manisy tsikera ratsy mba hahazoana antoka fa voavaha ny olana.
Fangatahana SMS - Mandefasa fangatahana fandinihana SMS namboarina avy eo amin'ny dashboard anao. Hahazo rohy manokana ny mpanjifanao handao ny hevitra amin'ny tranokala voatondroo.
Fangatahana mailaka - Mandefasa fangatahana fandinihana mailaka namboarina avy eo amin'ny dashboard anao. Hahazo rohy manokana ny mpanjifanao handao ny hevitra amin'ny tranokala voatondroo.
Mandefasa fangatahana marobe - Mandany fotoana tsirairay ny fandefasana ny fangatahana famerenana. Ampidiro ny fifandraisanao amin'ny alàlan'ny CSV ary andefaso fangatahana fanamarinana an-jatony indray mandeha.
Fanentanana mitete - Makà bebe kokoa amin'ny fangatahanao famerenana amin'ny alàlan'ny automatisan'ny hafatra SMS sy Email. TrueReview dia manamboatra azy io ho tsotra be dia be amin'ny famoronana fampielezana drip mandeha ho azy ho an'ny mpanjifanao.
Sorohy ny hevitra ratsy - Ny mpanjifa sambatra dia mamela famerenana ary ireo izay tsy afa-po dia afaka manome hevitra mivantana, na mifandray aminao hanao izay mahitsy. Aza avela handao ny mpitsikera diso hevitra ary hanimba ny lazanao amin'ny Internet!
Angony ny valiny - Asehoy ireo tranonkalanao raha toa ka tsara ny valin'ny fanadihadiana, na manomeza fomba haingana hanomezan'ny mpanjifanao hevitra mivantana raha ratsy ny valin'ny fanadihadiana.
Toerana famerenana - Ireo tranonkala famerenana izay efa namboarina dia misy ny Google, Facebook, Yelp, Angie's List, Foursquare, Yellow Pages, Zillow, Compass, Realtor.com, Redfin, Amazon, sy maro hafa. Ary raha tsy misy ny iray dia azonao atao ny manampy rohy fandinihana manokana!
Jereo sy valio - Miaraka amin'ny TrueReview, azonao atao ny mijery sy mamaly ny hevitrao rehetra eo afovoan'ny sehatra misy azy ireo.
Integrations - Ampifandraiso ny rindrambaiko CRM tianao indrindra handefasana ny fangatahana ho an'ny mpanjifanao, na hamorona fifandraisana vaovao ao amin'ny pejin'ny fifandraisanao isaky ny mahavita asa ianao, manidy tapakila, mahazo karama amin'ny serivisy, ary maro hafa! Ny fampidirana dia misy GoCanvas, Setmore Appointments, Google Contacts, Housecall Pro, Square, Jobber, Webmasters amin'ny trano, ServiceTitan, Mailchimp, Google Sheets, Hubspot, Acuity scheduling, LionDesk ary maro hafa.
Manomboha fitsapana 14 andro maimaim-poana
Fambara: mpiara-miasa amiko aho TrueReview ary mampiasa ny rohy mpampifandray ahy mandritra ny lahatsoratra.
Tags: Fandaharam-potoanafangatahana famerenana betsakamanangona hevitrafanehoan-kevitry ny mpanjifamailaka hevitraGoCanvasFifandraisana GoogleGoogle SheetsHousecall ProhubspotJobberLionDeskmailchimpfonosana sarintanyhevitra ratsyFanamarihana an-tseraseraWebmasters amin'ny trano sy tanyhevitraServiceTitanFanendrena Setmoresms hevitrakianjafanadihadianatruereview